१६ अ**र्ब लगानी*मा नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको सडक ६ ले*नको बनाइने! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
१६ अ**र्ब लगानी*मा नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको सडक ६ ले*नको बनाइने!
काठमाडौं : नागढुंगादेखि मुग्लि**नसम्मको ९४ दशमलव सात किलोमिटर सडक विस्तार गरिने भएको छ। हाल एकदेखि दुई लेन चौडाइको सडकलाई चारदेखि ६ लेनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो। सडकमा साँघुरा मोड रहेकाले त्यसलाईसमेत सुधार गरिने सडक विभागले जनाएको छ। मोड सुधार गर्दा सडकको लम्बाई पनि केही घट्ने सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए।
नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिन सड**कखण्ड रणनीतक सडक पहुँच तथा व्यापारिक सुधार आयोजनाअन्तर्गत स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। सडक त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत नागढुंगादेखि नौबिसेसम्म १२ दशमलव ७ किमी र पुथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे-मुग्लिन ८२ दशमलव चार किमी छ।
विश्व बैंकको ऋ**ण सहयोगमा यो सडकखण्डको विस्तार गर्न लागिएको हो। सडक निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै सडकको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने प्रावधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ। यो सडक निर्माणका लागि झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्‍ने अनुमान गरिएको छ।
सडक विस्ता**रमा तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो सडक प्रदेश ३ को काठमाडौँ, धादिङ र चितवन जिल्लामा फैलिएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको नागढुंगा चेकपोस्टबाट शुरु भएर नौबिसे, खानीखोला, महादेवबेँसी, गल्छी, बैरेनी, मलेखु बेनीघाट, कुरिनटार हुँदै चितवन जिल्लाको मुग्लिनसम्म सडक छ।
यस सडक**को विस्तारको तयारीसँगै त्यसको विकल्पका रूपमा त्रिशूली नदी पारिपट्टिको सडक निर्माणको योजना बनाइएको छ। राजमार्गको समानान्तरमा गल्छीदेखि विशालटारम्म दुई लेनको सहायक सडक निर्माण गर्न लागिएको हो।
पहिले नै ट्र्याक खुलिसकेको सडक भएकाले यसलाई स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन समस्या नहुने प्रमु**ख थापाले बताए। स्थानीय निकायले अहिले नै गल्छीदेखि मलेखुसम्म ट्र्याक खोलेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसलाई दुई लेन सडकका रूपमा विस्तार गरेर कालोपत्र गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ।
Previous एभोकाडो : जसले हृदया*घात, मधुमेह, कब्जियत र हड्डी खिइँने समस्या हुन दिँदैन!
Next पुरा पढ्नुहोस् , किन वडाध्यक्षलाई सर्वसाधारणले निर्घात कुटपिट गरे?